वैशाखमा मात्रै डेढ लाख कोरोना सङ्क्रमित थप, १६०८ ले ज्यान गुमाए : RajdhaniDaily.com
विक्रम गिरी - February 9, 2021 0
विक्रम गिरी - February 8, 2021 0
विक्रम गिरी - January 28, 2021 0
विक्रम गिरी - January 26, 2021 0
विक्रम गिरी - June 18, 2021 0
Home प्रमुख वैशाखमा मात्रै डेढ लाख कोरोना सङ्क्रमित थप, १६०८ ले ज्यान गुमाए
वैशाख १ गतेसम्म पिसिआर परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या २२ लाख ३६ हजार ५२६ जना थियो भने आज सो सङ्ख्या बढेर २७ लाख ३३ हजार ५१० पुगेको छ । वैशाखमा मात्रै चार लाख ९६ हजार ९८४ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । वैशाख महिनामा कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या ४९ हजार ४७ रहेको छ । कोरोना भाइरसबाट आजसम्म मुक्त हुनेको सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ६५३ पुगेको छ ।
उक्त सङ्ख्या वैशाख १ गते दुई लाख ७८ हजार ५०६ रहेको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर छ हजार १३५ सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशभर ह्वात्तै बढेको छ । वैशाख १ गते सक्रिय सङ्क्रमित चार हजार ५६ जना रहेकामा हाल उक्त सङ्ख्या बढेर एक लाख सात हजार ३३६ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनकपुरधाम । लकडाउनको बेला वन तस्करीमा संलग्न विरुद्ध वन कार्यालयहरुले प्रदेश २ मा विशेष अभियान चलाएको छ । यसैक्रममा बाराको चैतापुर वनबाट...
Exclusive सोमनाथ लामिछाने - May 18, 2021 0
काठमाडौं । गत २७ बैशाखको सोमबार इजरायलको जेरुसेलमतर्फ गाजा क्षेत्रमा सक्रिय हमास लडाकू समूहले ठूलो संख्यामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे । झण्डै एक महिनादेखि जारी...
Breaking News विक्रम गिरी - February 15, 2020 0
Breaking News विक्रम गिरी - April 5, 2020 0
अर्थ विक्रम गिरी - July 11, 2020 0
प्रदेश विक्रम गिरी - March 10, 2020 0
Exclusive विक्रम गिरी - October 8, 2020 0
Breaking News विक्रम गिरी - July 30, 2020 0
प्रमुख विक्रम गिरी - September 20, 2020 0
Breaking News विक्रम गिरी - December 1, 2020 0
प्रमुख विक्रम गिरी - March 9, 2020 0
विक्रम गिरी - March 5, 2020